Tababarka Hyperbaric - Takhasusaha Farsamada Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric Therapy HBOT
Tababarka Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOT
Home/Adeegyada Hyperbaric/Tababarka Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOT
Tababarka Hyperbaric - Daaweynta Oxygen Hyperbaric HBOTtekna_mod2018-01-21T12:48:49+00:00
Tekna waxay bixisaa Koorasyada Hyperbaric ee soo socda iyada oo loo marayo Kiniiniga Hyperbaric Daawada.
Dhammaan koorasyada ay ogolaatay College College of Hyperbaric Medicine (ACHM)
Ku Dallac Dhaqtarka Caafimaadka
Agaasimaha Badbaadada ee Hyperbaric
Aqoonyahanka Hyperbaric Acrylics
Takhaatiirta Farsameedka Tifaftiraha ee Hyperbaric Veterinary CHT-V
Koorsadan waxaa dib loo eegay islamarkaana ansixiyay Guddiga Qaranka ee Dhiiga & Tiknoolajiyadda Caafimaadka (Hyperbaric Medical Technology) (NBDHMT) oo buuxiya shuruudaha koorsada hordhaca ah ee daawada hyperbaric. Waxaa intaa sii dheer koorsadan waxaa dib loo eegay oo ay ansixisay College College of Hyperbaric Medicine loogu talagalay 40 Qeybta "A" CEU. Koorsada 40-ku waa ku haboon tahay Dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka waxayna ka kooban yihiin kulanno wada-shaqayn ah
Koorsadan waxaa dib loo eegay islamarkaana ansixiyay Iskuulada Maraykanka ee Daaweynta Hyperbaric iyo NBDHMT ee 40 Qaybta "A" CEU. Dhaqannada ganacsiga, xirfadlayaasha iyo kuwa sayniska badanaa waxay ku helayaan shaqada iyaga oo ka soocaya daaweynta iyo juqraafi ahaan. Meelaha dheeraadka ah iyo jirooyinka waaweyn ee biyaha ayaa sii adkeyn kara ka bixitaanka caafimaad ee kuwa kala duwan.
Koorsadan dhamaystiran ee 26-saac ayaa loogu talagalay inay bixiso qalab lagama maarmaanka ah iyo ilo-dhaqaale si loo fuliyo mas'uuliyadaha agaasimaha amniga sare (sida lagu qeexay NFPA 99).
Koorsadan dhamaystiran ee siddeed saacadood ah waxaa loogu talagalay in lagu tababaro mulkiilayaasha qolalka iyo farsamoyaqaannada dayactirka saxda ah, daryeelka, iyo dukumiintiyada dusha sawirrada akrimka (muuqaalka) ee fasallada A, B, iyo C, maraakiibta cadaadiska.
Tababarka Gardoonka ah - Ku bilow xirfadaada Daawada Hyperbaric. Wax ka baro macalimiinta ugu fiican ee la heli karo oo ku kasbado waxbarasho qiimo leh Daaweynta Oxygen ee Hyperbaric HBOT. Nala soo xiriir annaga maanta Jadwalka Fasalka Tababarka ee Hyperbaric.